Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Air India: Mihetsika ihany amin'ny farany?
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Toa mihetsika ihany ny raharaha amin'ny olana lehibe momba ny hoe iza no hanana sy hitantana ny Air India, izay hofoanan'ny governemanta.
Mipoitra ihany ireo mpamatsy vola amin'ny famatsiam-bola ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Air India.
Efa an-taonany maro ny nanandrana nivarotra ilay zotram-pirenena, miaraka amin'ny fanandramana voasakana noho ny antony maro samihafa.
Mbola eo am-baravarankely ihany ny fatiantoka goavana ataon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka - toy ny hoe iza no hitantana izany - ilay mpividy vaovao sa ny governemanta?
Tata Sons, izay nanorina Seranam-piaramanidina Air India tamin'ny 1932 ary avy eo nivoaka tamin'ny 1953, dia mpangataka indray ny zotram-pitaterana an'habakabaka, ary nandefa tolo-bola ara-bola miaraka amin'ireo mpamatsy vola lehibe hafa.
Ny filohan'ny SpiceJet, Ajay Singh, dia nanao tolotra ihany koa, ary nisy vola fampiasam-bola sasany koa nanatevin-daharana an'i Singh tamin'ny fizotran'ny tolotra mba hiantohana ny zotram-piaramanidina. Singh dia mpilalao lehibe teo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina nandritra ny taona maro izao, ary ny anjara asany ankehitriny Jerena ny Air India amin'ny fahalianana be.
Ny fanadiovana ny filaminana sy ny fanamboarana ny vidin'ny tahiry amidy dia lafin-javatra roa lehibe tsy maintsy vahan'ny governemanta. Antony iray hafa izay nampanahy ny fanontaniana ny amin'ny fomba hiatrehana ireo fatiantoka goavana voangon'ny Air India nandritra ny taona maro, ary ny fomba hitondrana ireo fananana hafa ao amin'ny tsipika Maharaja, ao anatin'izany ny fananany sy ny fanangonana zavakanto. Ny fikirakirana ny tany sy ny fikolokoloana ny rivotra no olana mitaintaina hatramin'ny nananganana ny resaka famoaham-bola.
Nandritra izay taona vitsy lasa izay, efa maro ny andrana natao hivarotana ilay kaompaniam-pitaterana nasionaly, saingy nijanona noho ny antony maro samihafa ireo andrana ireo. Ny iray amin'ireo antony lehibe dia ny fomba hamaliana ny fanontaniana hoe iza no hisahana ny fatiantoka goavana - ny mpividy vaovao sa ny governemanta?
Ny olan'ny mpiasa koa dia nanjary olana teo amin'ny toerany, miaraka amin'ny fanontaniana toy ny hoe iza no tazomin'ny mpividy vaovao, ary iza no horoahina? Ireo sendika sy ireo fikambanana dia teo am-panafana sehatra iray te-hiteny ary mieritreritra ny hanao tolotra mihitsy aza.
Ny anjara toerany, raha misy, ny mpividy vahiny dia resaka niresaka ihany koa, fa ankehitriny dia toa nanolotra tolo-kevitra ara-bola ireo mpanolo-tsaina lehibe amin'ny endrika fandraisana anjaran'i Tatas sy Ajay Singh.
September 19, 2021 ao amin'ny 07: 47
Fantatro fa tsy hoe te hiaraka aminao aho. Tsia. Indraindray dia tsapako fa mendrika ny miaraka aminao aho, toy ny mendrika ny ratra entinao amiko mora foana. “Jereo, raha tena te-handroso ianao aorian'ity fotoana ity dia mila mamela azy ianao amin'ny fanaintainana izay nataony anao, na iza ianao na tsia.